Ukuqonda uvavanyo lweTyuwa lokuCoca umhlwa
Umhlwa kukutshatyalaliswa okanye ukonakala kwezinto okanye iipropathi zazo ezibangelwa yimekobume. 1. Umhlwa omninzi wenzeka ngenxa yeempawu ezizodwa kwimeko-bume yomhlaba. Umoya wenziwe ngezinto ezonakalisayo kunye nezinto ezinobungozi ezifana neoksijini, ukufuma, ithem ...
Ngo-Septemba wama-29, ngo-2020 iJitai Electronics Co., Ltd yabamba iMid-Autumn Coversazione yomfundi wasekholejini ngo-2020 yenye yezinto ezilungileyo kwinkampani yam kwaye inika nethuba lokukhula ngokwabo abathi bajoyine inkampani. Okwangoku ikwalilo neqonga lokuba wonke umntu aziphathe kakuhle (yena) ....
Ngomhla kaMatshi 1, 2020 iJitai Electronics Co, Ltd yabamba intlanganiso yokhuseleko lomsebenzi ngoveliso lwemveliso. ukwenza isicwangciso solungiselelo lwalo nyaka kukhuseleko lomsebenzi. Amalungiselelo okhuseleko emsebenzini ngo-2020 ukusukela nge-1 kaMatshi 2020 ukuya kwi-31, 2020 kukho amanqanaba amathathu: Inqanaba lokuqala: Mar-1 ukuya kuMatshi 31, bonke abasebenzi abavela kuyo yonke into ...
Uphuhliso kunye nokuPhuculwa kwePhepha leSinyithi labaNxibelelanisi boMbane ngoFebruwari 25, 2020, iSebe leMarike eJitai Electronics Co, Ltd liququzelele intlanganiso yesiqhelo yentengiso, Kule ntlanganiso, sithathe isigqibo sokuphuhlisa izihlanganisi zombane ngokukhawuleza ukubonelela ngeemarike zehlabathi ngombane ...